Man United Kaliya Hasoo Buuxiso Halkan Shuruud Kaddib Hala Wareegaan Harry Maguire - Leicester City Oo Si Cad Warkeeda Ugu Sheegatay Red Devils - Gool24.Net
Man United Kaliya Hasoo Buuxiso Halkan Shuruud Kaddib Hala Wareegaan Harry Maguire – Leicester City Oo Si Cad Warkeeda Ugu Sheegatay Red Devils
Manchester United ayaa halkeeda kasii wadaysa raacashada tartanka daafaca Leicester City ee Harry Maguire kaas oo ay haatan mudo sanad ah daba socdaan sidoo kalena uu xiiso ka haystay tababarihii hore ee Jose Mourinho.
Tababaraha haatan ee Man United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa la fahamsan yahay inuu madaxda kooxdiisa u sheegay inay u dhaqaaqaan saxeexa Maguire isla markaana ay waxkasta u sameeyaan.
Man United ayaa sidii aanu hore idiinla soo wadaagnay dhawaan dalab 70 Milyan ah ka gudbisay daafacan heer caalami ee xulka England balse Foxes ayaa dalabkaas kusoo gacan saydhay.
Si lamid ah Man United, Kooxda difaacanaysa horyaalka ee Manchester City ayaa sidoo kale ku jirtay tartanka Maguire balse wargeyska The Sun ayaa sheegaya in Pep Guardiola iyo kooxdiisu ay iskaga baxeen loolanka.
Dhinaca kale, The Sun ayaa banaanka keenay HAL SHURUUD oo kaliya oo ay Leicester City ku aqbali karto in safka United uu kamid noqdo hormoodka daafaceedu waana in kooxdaas si bixiso lacagta ay dalbanayaan.
Lacagtaas ayaa ah £85 Milyan taas oo haddiiba ay Man United aqbasho 26 jirkan ka dhigi doonta daafaca ugu qaalisan abid taariikhda kubadda cagta.
Baahida weyn ee ay Man United u qabto saxeexa daafacan iyo in xilli ciyaareedkii hore si aan looga baran looga soo dhaliyay goolal aad u tiro badan ayaa ku qasbi karta inay bixiyaan waxkasta oo ay dalbato Leicester.
Walow ay haatanba Old Trafford ku sugan yihiin lix daafac dhexe oo kala ah Smalling, Bailly, Jones, Rojo, Lindelof iyo Tuenzebe haddana Solskjaer ayaa u muuqda mid ka aamin baxsan haddii ay kasoo wada dhalaali doonaan boosaska daafaca dhexe.